Akhri: Duqeymaha Mareykanku ka geystay Soomaliya & magacyada dadkii lagu dilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
31st December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2008, Mareykanka ayaa dhowr duqeyn ka geystay Soomaaliya, kuwaasoo uu la beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan Alshabaab iyo Alqaacidda
May 1, 2008: Taliyihii ciidamada Alshabaaab ayaa lagu dilay gentaal Mareykanku soo tuuray isagoo ku sugnaa degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, halkaas ayuuna ku dhintay.
Sept. 14, 2009: Mareykanku wuxuu duqeyn diyaaradeed ku dilay Saleh Ali Nabhan, oo ahaa hogaamiye ka tirsan Alqaacidda, kana soo jeeday Kenya, Ninkaas waxaa looga shakisanaa inuu abaabulay weeraradii sanadkii 1998 isku waqti lagu qaaday safaaradaha Mareykanku ku lahaa Kenya iyo Tanzaniya.
Jan. 22, 2012: Diyaarad nuuca aan duuliyuhu wadin “Drone” oo Mareykanku lahaa ayaaa dishay sarkaal ka tirsanaa Alshabaab, kana soo jeeday dalka Lubnan balse heystay dhalshada dalka Britain, kaasoo la oranjiray Bilal Berjawi. Dilka ninkaas ayaa ka dhacay meel u dhaxeysa deegaanka Siinka Dheer iyo Ceelasha Biyaha ee ku dhow Muqdisho.
Feb. 24, 2012: Diyaarad kale oo “Drone” ah oo Mareykanku lahaa ayaa dishay Sheikh Ibrahim Abu Uhud, oo u dhashay dalka Moroco, weerarkaas oo ka dhacay meel ku dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Oct. 28, 2013: Sarkaal Al-Shabab u sameyn jiray qaraxyada oo la oran jiray Ibrahim Ali Abdi “Anta Anta” ayaa duqeyn diyaarad Drone lagu dilay agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Jan. 26, 2014: Waxaa Mareykanku duqeyn ku dilay Ahmed Abdulkadir “Iskudhuuq”, oo lataliye sare u ahaa hogaamiyihii isna la dilay ee Alshabaab, Ahmed Abdi Godane (Abu Zubeyr).
Sept. 1, 2014: Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah ku dilay homaaiyihii Alshabaab, Ahmed Abdi Godane xilli uu marayey meel ku dhow degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dec. 29, 2014: Diyaar Drone ah oo Mareykanku leeyahay ayaa duqeyn ku dishay Abdishakur Tahlil oo ahaa madaxa sirdoonka Al-Shabab, waana sarkaalkii ugu dambeeyey ee Mareykanku duqeyn ku dilo.
Alshabaab oo sanadkii 2012 beyco la galay hogaamiyaha Alqaacidda Dr. Ayman Al-zawahiri ayaa Mareykanku weli baacsanaa hogaaamiyaashooda, isagoo qaar badan horay u duldhigay lacag adag.
Askari 7 ruux ku dhaawacay degmada Xamarweyne